स्कूल बसवाट खसेर एक विद्यार्थीको निधन – Gorkhali Dainik
March 12, 2021 281
काठमाडौ,स्कूल बसवाट खसेर एक विद्यार्थीको निधन भएको छ । यो महोत्तरीमा भएको घटना हो । महोत्तरीको रामगोपालपुर न’गरपालिका ५ मा रहेको जानकी युगान्तर इङलिस बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीको निधन भएको हो ।
उनी सो विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत्त विद्यार्थी १४ वर्षीय मोदसी सेकको बसवाट खसेर निधन भएको हो । बुधबार दिउँसो स्कुल विदा भएपछि बा ३ ख २३९७ नम्बरको स्कुल बसमा चढेर उनी घर गइरहेका थिए । ढोका निर उभिएका उनी चालकले ब्रेक लगाएको बेला गोठ बनौली पुल नजिकै बसवाट खसेका थिए ।
उनको घटनास्थलमै निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना पश्चात भाग्न खोजेका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको र घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय रामगोपालपुरले जनाएको छ।
२ वर्ष सम्म त्यस्तो सम्बन्धमा रहेकी श्रीमती अहिले छोडेर हिँडेपछि श्रीमान मिडियामा आएका हुन् । उनीहरुको एक सन्तान पनि छन् । दुई वर्ष देखि आफुसंग सम्बन्ध राख्न नचाहेकी महिला गीता गाहा (वुटवल) हराएकी हुन् ।
उनका १० वर्षका छोरा छन् । गीताको श्रीमानले आफु समस्यामा परेँ भन्दै न्याय चाहियो भनेका छन् । डेढ महिना देखि श्रीमती कहाँ छन् भन्ने थाहा पाउन नसकेपछि अन्त्यमा मिडियाका सहारा लिन आएको बताएका छन् । ५ मा पढ्ने छोराले बारम्बार आमा खोज्ने गरेको पनि बताएका छन् ।
श्रीमती हराए पछि मात्र आफुले श्रीमतीको अरु कुनै पुरुषसंग सम्बन्ध रहेको थाहा पाएको बताएका छन् । श्रीमान घरमै भएको बेलामा उनी घर छोडेर हिँडेको बताए । त्यो दिन विहानै देखि यता र उता गरिरहेको थियो, उसको हिड्ने योजना रहेछ श्रीमान भन्छन्, हाम्रो बोलचाल राम्रोसंग नभएको २ वर्ष भएको थियो ।
अर्कोसंग लागेर होला घरमा आएर सबैसंग वि वाद गर्ने गर्थिन,आमाबुवालाई खाना पनि पकाइदिन्थनन् । त्यही भएर बोलचाल नै थिएन । उनका श्रीमान ग्रिलको काम गर्ने गरेका छन् । १० वर्षको छोरालाई आमाको बारेमा झुटो बोलेको बताएका छन् ।
ममी खै ? भनेर छोराले सोध्छ, राती उठेर यता र उता खोज्छ आमालाई नै खोजेको होला । छोराको ब्यवहार देखेर निकै नराम्रो लाग्छ । घरमै हुँदा पनि उनी घरवाट बारम्बार निस्कने गरेको थियो । जतिबेला मनलाग्यो घर आउने नत्र घरवाट हिड्ने गरेको श्रीमानको भनाई छ ।
Prevबट्टाईको अण्डा खानु भएको छ ? यस्ता यस्ता रोगको लागि अचुक ओखती हो बट्टाईको अण्डा
Nextसंसारमै पहिलो पटक क्यासेट टेप आविष्कार गर्ने व्यक्ति लू ओट्सनको निधन